Indlu yokulala ye-Rsf 3! - I-Airbnb
Indlu yokulala ye-Rsf 3!
UAndrew unezimvo eziyi-394 zezinye iindawo.
Le ndlu yindlwana efikelelekayo esandula ukulungiswa ngokutsha yasentshona eneembiza zeBASIC, iipani kunye nezinto zokupheka. Ikhabhinethi ibekwe kwindawo enoxolo yabucala yedolophu ebonelela ngokubaleka kwingxolo yesixeko. I-Complex yimizuzu emi-3 ukusuka edolophini yeDodge City.
I-Rancho Santa fe complex ine-drive yayo yabucala ene-airbnb Rentals ezininzi ezikhoyo.
Njengondwendwe lwe-RSF uya kuba nokufikelela kwiziko lethu leFitness kwi-complex ngokunjalo. Ixesha elifutshane
Kukwakho umntu ofumanekayo 24/7 ngayo nayiphi na imibuzo.
Ubunzima obukhulu obugcwele ngumsebenzi. Isetingi yodidi lweRanch
Rancho Santa Fe Complex ibekwe kwi Dodge City KS. Nge-drive yayo yabucala kunye nokungena kwiComplex yindawo ekhuselekileyo, ezolileyo, kunye nendawo yabucala. Njengomamkeli wakho sihlala kwi-complex 24/7 ukunika naluphi na uncedo. Ininzi indawo yokupaka iitreyila, kunye neZithuthi ezininzi.
Ifama yayiyinkampu yolutsha kwiminyaka emi-5 eyadlulayo kodwa iye yalungiswa yaza yalungiselelwa i-airbnbs. Ifama yimizuzu emi-5 ukusuka edolophini kwaye intle kwaye izolile. Zive ukhululekile ukuzulazula kwi-100 yeehektare zepropathi.
Undwendwe lwethu lunokufikelela kwiziko lethu leFitness ngexesha lokuhlala ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo.
Ndilapha ukuba ufuna nantoni na